50.000 taonina ny zotram-pamokarana zezika - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Ny zezika mitambatra, fantatra ihany koa amin'ny zezika simika, dia zezika misy otrikaina roa na telo amin'ny zezika, toy ny azota, phosorea ary potasioma, novolavolain'ny fihetsiky ny simika na ny fomba fampifangaroana; zezika mitambatra dia mety ho vovoka na granular. Ny zezika mitambatra dia misy akora mavitrika avo lenta, mora solika ao anaty rano, lo haingana, ary mora voan'ny faka. Noho izany dia antsoina hoe "zezika malaky miasa" izy io. Ny asany dia ny fanefana ny fangatahana feno sy ny fifandanjan'ny karazan-tsakafo isan-karazany amin'ny fepetra famokarana samihafa.
Ny tsipika famokarana isan-taona misy zezika mitambatra 50 000 taonina dia fitambarana fitaovana mandroso. Tsy mahomby ny vidin'ny famokarana. Ny tsipika famokarana zezika marobe dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana akora samihafa mifangaro. Ary farany, ny zezika mitambatra misy fifantohana sy raikipohy samihafa dia azo omanina arakaraka ny tena filàna, mameno tsara ireo otrikaina ilain'ny voly, ary mamaha ny fifanoherana misy eo amin'ny fangatahana sy ny famatsian-tany.
Ny làlan'ny famokarana zezika mitambatra dia ampiasaina indrindra hamokarana zezika mitambatra misy raikipohy isan-karazany toy ny azota potasioma, fôfôphôla potasioma potasioma, klôrozôma potasioma, sulfate granular, asidra solifara, nitrate amoniôma ary raikipohy hafa.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina amin'ny fitaovana famokarana zezika anay, dia manome fitaovana ho an'ny mpanjifa izahay ary ny vahaolana mety indrindra amin'ny filan'ny fahaiza-manao isan-karazany toy ny 10.000 taonina isan-taona ka hatramin'ny 200.000 taonina isan-taona. Ny fitambarana fitaovana feno dia mifono, mitombina ary ara-tsiansa, miaraka amina fiasan-drindrina maharitra, vokany fitsitsiana angovo tsara, vidin'ny fikojakojana ambany ary fiasa mety. Io no safidy mety indrindra ho an'ny mpanamboatra zezika (zezika mifangaro).
Ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia afaka mamokatra zezika mitambatra avo lenta sy antonony ary ambany avy amin'ny voly samihafa. Amin'ny ankapobeny, ny zezika mitambatra dia misy otrikaina roa na telo farafaharatsiny (azota, phosforus, potasioma). Izy io dia manana ny mampiavaka ny atiny mahavelona be ary vitsy ny voka-dratsiny. Ny zezika mitambatra dia mitana andraikitra lehibe amin'ny zezika voalanjalanja. Tsy afaka manatsara ny fahombiazan'ny zezika fotsiny izy io, fa mampiroborobo ihany koa ny vokatra azo sy avo lenta.
Fampiharana tsipika famokarana zezika mitambatra:
1. Fomba famokarana urea solifara.
2. Fomba famokarana samihafa amin'ny zezika mpiorina voajanahary sy tsy misy.
3. dingana zezika asidra.
4. Drafitra zezika tsy biolojika indostrialy vovoka.
5. Drafitra famokarana urea be grainedina lehibe.
6. Fomba famokarana zezika matrix ho an'ny zana-ketsa.
Akora azo ampiasaina amin'ny famokarana zezika biolojika:
Ny akora vita amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia urea, ammonium chloride, ammonium sulfate, amoniaka ranon-javatra, amonium phosphate, diammonium phosphate, potassium chloride, potassium sulfate, ao anatin'izany ny tanety sasany sy ny mpameno hafa.
1) Zezika azota: amoniôma klôro, amoniôma sulfate, amonium thio, urea, calcium nitrate, sns.
2) Zezika potasioma: potassium sulfate, ahitra sy lavenona, sns.
3) zezika phosforus: perphosfat calcium, perphosphate calcium lehibe, zezika manezioma ary zezika phosphate, vovoka ozy phosphate, sns.
Ny zotram-pamokarana zezika mitambatra dia ampiasaina matetika hamokarana zezika mitambatra avo lenta. Ny granular disk dia azo ampiasaina hamokarana teknolojia zezika mitambatra avo sy ambany, ampiarahina amin'ny teknolojia zezika manohitra fitohanana, teknolojia famokarana zezika mitambatra azota, sns.
Ny tsipika famokarana zezika marobe ao amin'ny orinasa misy anay dia manana ireto toetra manaraka ireto:
Ampiasaina be ny akora manta: ny zezika mitambatra dia azo novokarina arakaraky ny raikipohy isan-karazany sy ny refin'ny zezika mitambatra, ary mety koa amin'ny famokarana zezika fambolena sy tsy organika.
Avo ambany ny taha ambony indrindra amin'ny spherical sy ny biobacterium: ny fizotrany vaovao dia mety hahatratra 90% ka hatramin'ny 95%, ary ny teknolojia fanamainana ny hafanana ambany dia mety hahatonga ny bakteria mikraoba hahatratra ny tahan'ny fahavelomana mihoatra ny 90%. Ny vokatra vita dia tsara tarehy amin'ny endriny ary na dia amin'ny habeny aza, ny 90% amin'ireo dia poti-java-bitika 2 ka hatramin'ny 4mm.
Ny fizotran'ny asa dia miovaova: ny fizotry ny tsipika famokarana zezika mitambatra dia azo ahitsy arakaraka ny tena akora, ny raikipohy ary ny tranokala, na ny fizotrany namboarina dia azo natao arakaraka ny filan'ny mpanjifa tena izy.
Ny ampahany amin'ny otrikaina amin'ny vokatra vita dia miorina: amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny akora ilaina ho azy, ny fandrefesana marina ny valaka, ny ranoka ary ny akora hafa, izay mihazona ny fitoniana sy ny fahombiazan'ny otrikaina tsirairay mandritra ny fizotrany.
Ny fizotry ny fizotry ny tsipika famokarana zezika mitambatra matetika dia azo zaraina ho: akora akora, fampifangaroana, fanorotoroana nodulo, fanangonam-bolo, fisavana voalohany, fanamainana vongan-tany, fanamafisana ny sombin-javatra, fanaraha-maso faharoa, firakotra potika vita, ary fonosana vita amin'ny vokatra vita.
1. akora ilaina amin'ny akora:
Ny vongan-kazo ao amin'ilay fitaovana dia potehina aorian'ny fampifangaroana mitovy, izay mety amin'ny fanodinana granulation aorian'izay, amin'ny ankapobeny mampiasa crusher rojo.
Ny fitaovana aorian'ny fampifangaroana milamina sy potipotehina dia entina any amin'ny masinin-tsolika amin'ny alàlan'ny mpampita fehikibo, izay tapany lehibe amin'ny tsipika famokarana zezika mitambatra. Ny safidin'ny granulator dia tena zava-dehibe. Ny orinasanay dia mamokatra disk granulator, drum granulator, roller extruder na granulator zezika mitambatra.
Sivana ny sombin-kazo, ary ny sombin-kazo tsy manam-paharoa dia averina amin'ny fangaro mifangaro ambony sy mampihetsi-po ho an'ny fanodinana. Amin'ny ankapobeny dia milina sivana no ampiasaina.
Ity dingana ity dia mandray milina famonosana isa ho azy. Ny masinina dia misy milina fandanjana mandeha ho azy, rafitra mpampita, masinina famehezana, sns. Azonao atao koa ny manamboatra hopper arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Izy io dia afaka mahatsapa ny fonosana habetsahan'ny akora betsaka toy ny zezika biolojika sy zezika mitambatra, ary efa be mpampiasa amin'ny ozinina fanodinana sakafo sy ny tsipika famokarana indostrialy.